Waddooyinka Muqdisho Oo loo Xiray Banaan Bax Lagu Taageerayo Farmaajo.
Sunday June 04, 2017 - 11:11:30 in Wararka by Super Admin
Kumanaan katirsan ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo maleeshiyaadka Dowladda Federaalka ayaa xiray inta badan waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho.
Kumanaan qof oo isticmaali jiray gaadiidka gaarka ah iyo midka dadweynaha ee BL-ka ayaa iyagoo cagahooda maalaya lagu arkayaa waddooyinka caasimadda.
Kadeedkan lageliyay shacabka Muqdisho iyadoo lagu jiro bisha Barakaysan ee Ramadaan ayaa loo yeelayaa sugidda ammaanka Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre kuwaasi oo ka qeyb gelaya dibad bax taageero loogu muujinayo maamulka Villa Somalia.
Garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium ayaa laysugu geeyay Tobanaan kun oo lagasoo aruuriyay 16-ka degmo ee gobolka Banaadir, Farmaajo ayaa isku dayaya in uu soo bandhigo dhoolatus dhanka siyaasadda ah 100 maalmood kadib markii loo doortay Hoggaamiyaha Dowladda Federaalka.
Marwalba oo Farmaajo uu ku socdaalayo gudaha magaalada Muqisho waxaa loo xiraa waddooyinka waana dhaqan uu ka dhaxlay hoggaamiyaashii dabadhilifyada ahaa ee isaga ka horreeyay sida Cabdullaahi Yuusuf, Xasan Gurguurte iyo Shariif Sheekh Axmed.